သန္ဓေတားခြင်းဆိုတာဘာလဲ? သားကြောဖြတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ? မိန်းမကိုယ်ပြင်ပ၌ သုတ်လွှတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ? မိန်းမကိုယ်ပြင်ပ၌ သုတ်လွှတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ? ရာသီပေါ်ချိန် ဆက်စပ်ရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလား? အမျိုးသမီးများအတွက် သန္ဓေတားနည်းတွေဟာ ဘာလဲ? Condom ဆိုတာဘာလဲ? Condom အသုံးပြုနည်းကို ဘယ်လိုလေ့လာနိုင်မလဲ? အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ နှစ်ဦးစလုံး တပြိုင်တည်း Condom သုံးလို့ရသလား? IUCD ဆိုတာဘာလဲ? Iရက်ရှောင်၍နေနည်း ဆိုတာဘာလဲ? စိတ်ချရသောရက်တွေဆိုတာဘာလဲ? စိတ်မချရတဲ့ရက်တွေဆိုတာဘာလဲ? စိတ်ချရသောရက်တွေကို ရွေးပြီးအတူနေလျက် ဘာကြောင့်ကိုယ်ဝန်ရတတ်သလဲ? စိတ်ချရတဲ့ရက်တွေကို ဘယ်လိုတွက်ချက်မလဲ? စိတ်ချရတဲ့ရက်တွေကို တွက်ချက်လို့မရသူများ ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
သန္ဓေတားခြင်း နဲ့ ပတ်သက်လို့ CHAT Room မှာ ဝိုင်းဆွေးနွေးမယ်။
ပြီးရင် သန္ဓေတားခြင်း နဲ့ပတ်သက်လို့ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးဖို့ ဒီပေ့ခ်ျကို ပြန်လာရပါမယ်။